ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၃ ပေ / ၄ မီတာ
40°38′23″N 073°46′44″W﻿ / ﻿40.63972°N 73.77889°W﻿ / 40.63972; -73.77889ကိုဩဒိနိတ်: 40°38′23″N 073°46′44″W﻿ / ﻿40.63972°N 73.77889°W﻿ / 40.63972; -73.77889
New York City၏ မြေပုံကို ပြသရန်
New York၏ မြေပုံကို ပြသရန်
North America၏ မြေပုံကို ပြသရန်
4L/22R 12,079 ၃,၆၈၂ Concrete
4R/22L 8,400 ၂,၅၆၀ Asphalt
13L/31R 10,000 ၃,၀၄၈ Asphalt
13R/31L 14,511 ၄,၄၂၃ Concrete
H1 60 ၁၈ Asphalt
H2 60 ၁၈ Asphalt
H3 60 ၁၈ Asphalt
H4 60 ၁၈ Asphalt
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ (2017)
ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် သည် နယူးယောက်မြို့၏အဓိကလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ဤလေဆိပ်သည်မြောက်အမေရိက၏အလုပ်အရှုံးဆုံးလေကြောင်းဝင်ပေါက်ဖြစ်ကာကမ္ဘာပေါတွင် ၂၂ခုမြောက်နှင့် အမေရိကန်တွင် ၆ခုမြောက်အလုပ်အရှုပ်ဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ၁၉၄၈တွင် နယူးယောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဖြစ်ကာ အိုင်ဒယ်ဝယ်လေဆိပ်အဖြစ်လူသိများသည်။၁၉၆၃ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်၏၃၅ယောက်မြောက်သမ္မတ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ လုပ်ကြံခံရအပြီးသူ့ကိုဂုဏ်ပြု၍အမည်ပြောင်းလဲပေးထားသည်။
နယူးယောက်မြို့မြေပုံမှနံပါတ်၁ မှာ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်၂မှာ လာကွာဒီယာလေဆိပ်၊နံပါတ်၃မှာနယူးအက်လေဆိပ်များဖြစ်သည်။
အိုင်ဒယ်ဝယ်လေဆိပ်(Idlewild Airport (IATA: IDL, ICAO: KIDL, FAA LID: IDL))အဖြစ်စတင်အမည်ပေးခဲ့သည်။ လကွာဒီယာလေဆိပ်၏လူပြည့်မှုကိုကူညီရန်ဆောက်ခဲ့သည်။၁၉၄၃ခုနှစ်တွင် ဧက ၁၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသော အိုင်ဒယ်ဝယ်ဂေါက်ကွင်းနေရာကိုလျာထားသည်။
၁၉၄၂တွင်သေဆုံးခဲ့သော ကွင်းအိမ်ရာတွင်နေထိုင်သူဗိုလ်မှူးအန်ဒါဆင်လေဆိပ်ဟုလည်းအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။၁၉၄၈တွင်မြို့တော်ကောင်စီက နယူးယောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊အန်ဒါဆင်ကွင်းဟုပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း အရပ်ခေါအဖြစ် အိုင်ဒယ်ဝယ်ဟုသုံးကြသည်။
၁၉၄၈ခု ဇူလိုင်၁ရက်နေ့တွင် ပထမဆုံးလေယာဉ်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်ကသမ္မတ ထရူးမန်းတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
လေဆိပ်အဆောက်အဦး၆ခုရှိသည်။ ဂိတ်ပေါင်း ၁၂၈ခု ရှိသည်။ နံပါတ် ၁၊၂၊၄၊၅၊၇၊၈ဖြစ်သည်။ နံပါတ်၃နှင့်၆မှာ ၂၀၁၃နှင့်၂၀၁၁တွင်ဖြိုဖျက်ထားသည်။
အဆောက်အဦး၁ကို လေဆိပ်ဖွင့်အပြီး နှစ်၅၀အကြာ၁၉၉၈တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဓိကလေကြောင်းလိုင်း၄ခုဖြစ်သော ပြင်သစ်လေကြောင်း၊ဂျပန်လေကြောင်း၊ကိုရီးယားလေကြောင်းနှင့် လူတန်စာလေကြောင်းတို့ရှိသည်။
အဆောက်အဦး၂ ကို ၁၉၆၂တွင်ဖွင့်လှစ်သည်။
အဆောက်အဦး၄ ကို ပြည်ပအော်ပရေတာမှထိန်းချုပ်သည်။၎င်းသည် နိုင်ငံတကာဆိုက်ရောက်များ၏အဓိကဂိတ်ဖြစ်သည်။
13R/31L ၁၄,၅၁၁ ပေ (၄,၄၂၃ မီတာ) ၂၀၀ ပေ (၆၁ မီတာ) Cat. I (31L) Third-longest commercial runway in North America (the longest isa၁၆,၀၀၀ ပေ (၄,၉၀၀ မီတာ) runway at Denver International Airport. Second isa၁၄,၅၁၂ ပေ (၄,၄၂၃ မီတာ) runway at Las Vegas International.) Adjacent to Terminals 1, 2, and 3. Handled approximately one half of the airport's scheduled departures. It wasabackup runway for space shuttle missions. It was closed on March 1, 2010 for four months. The reconstruction of the runway widened it from ၁၅၀ to ၂၀၀ ပေ (၄၆ to ၆၁ မီတာ) withaconcrete base instead of asphalt. It reopened on June 29, 2010.
4R/22L ၈,၄၀၀ ပေ (၂,၅၆၀ မီတာ) ၂၀၀ ပေ (၆၁ မီတာ) Cat. III (both directions) Equipped at both ends with Approach Lighting Systems (ALS) with sequenced flashers, and touchdown zone (TDZ) lighting. The first Engineered Materials Arresting System (EMAS) in North America was installed at the northeast end of the runway in 1996. The bed consists of cellular cement material, which can safely decelerate and stop an aircraft that overruns the runway. The arrestor bed concept was originated and developed by the Port Authority and installed at JFK Airport asajoint research and development project with the FAA and industry.
4L/22R ၁၂,၀၇၉ ပေ (၃,၆၈၂ မီတာ) ၂၀၀ ပေ (၆၁ မီတာ) Cat. I (both directions) Adjacent to Terminals4and 5. Both ends allow instrument landings down to three-quarters ofamile's visibility. Takeoffs can be conducted with one-eighth ofamile's visibility. It closed on June 1, 2015 for almost4months as part ofamajor runway modernization project that replaced the asphalt base withaconcrete base and widened the runway from 150 feet to 200 feet. It reopened on September 28, 2015.
13L/31R ၁၀,၀၀၀ ပေ (၃,၀၄၈ မီတာ) ၁၅၀ ပေ (၄၆ မီတာ) Cat. II (13L); Cat. I (31R) Adjacent to Terminals5and 7. Equipped at both ends with ILS and ALS systems. Runway 13L has two additional visual aids for landing aircraft,aPrecision Approach Path Indicator (PAPI) andaLead-In Lighting System (LDIN). The ILS on 13L, along with TDZ lighting, allows landings down to halfamile's visibility. Takeoffs can be made with visibility of one-eighth ofamile.
↑ The JetBlue focus cities (PDF)။ December 31, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AirNav: John F Kennedy International Airport။ Web.archive.org။ November 14, 1999 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2018-03-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ General Information။ The Port Authority of New York and New Jersey (February 2017)။ 10 June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 15, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "JFK closure to rattle nerves, wallets"၊ MSNBC၊ March 2, 2010။ August 30, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4November 2012။
↑ Miranda၊ Maria Eugenia။ "JFK's Longest Runway Re-opens"၊ NBC New York၊ June 29, 2010။
↑ Press Release Article – Port Authority of NY & NJ။ Panynj.gov။ 22 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 2, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျွန်_အက်ဖ်_ကနေဒီ_အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်&oldid=727843" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။